Weerar Naf Hurnimo Ah Oo Ka Dhacay Waqooyga Gaalkacyo+Faahfaahin. – Bogga Calamada.com
Weerar Naf Hurnimo Ah Oo Ka Dhacay Waqooyga Gaalkacyo+Faahfaahin.
Qarax xoogan ayaa barqo nimadii Maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug gaar ahaan dhanka Waqooyi ee magaaladaasi.
Qaraxan oo ahaa mid aad xoogan islamarkaana dhawaaqiisa si aad ah looga maqlay xaafadaha kala duwan ee magaalada Gaalkacyo waxaa lala beegsaday Xafiiska Taliyaha ciidamada Murtadiinta ee isku magacaabay isku dhafka.
Xafiiska la weeraray waxa uu kasoo horjeedaa Hooygii hore ee Murtad Cabdi Llaahi Yuusuf Waxaana soo baxaya khasaaraha ka dhashay weerarkaasi.
Wararka hor dhaca ah ee Idaacada Islaamiga ah Andalus ay heshay ayaa xaqiijinaya in Weerarkaasi lagu dilay Taliyihii Ciidamada Murtadiinta Isku dhafka Murtadka lagu magacaabo Gaashaanle Sare Cabdi Cabdullaahi oo ku magac dheeraa (Xureeye)
Sidoo kale waxaa lagu dilay Taliyihii qeybta gaadiidka ee ciidamada isku dhafka Murtadka lagu magacaabo C/qani Axmed Geyre.
Sarkaal Saddex-aad ayaa sidoo kale lagu dilay qaraxa kaasi oo warar aan la xaqiijin ay sheegayaan inuu yahay taliya ku xigeenkii ciidamada isku dhafka,
Marka laga soo taga saraakiisha sidoo kale waxaa qaraxaasi lagu dilay tiro askari tiro kalane waa lagu dhaawacay,Tiradada guud ee dhimashada ayaa hadda mareyso ilaa Lix kuwaasi oo saddex ka mid ah ay saraakiil tahay.
War rasmi ah oo kasoo baxay Taliska ciidamada Mujaahidiinta Alshabaab ayaa lagu xaqiijiyay in weerarka qaraxa ee lala beegsaday xafiiska taliyaha ciidamada Isku dhafka Murtadiinta ee ka dhacay waqooyga Gaalkacyo uu yahay Camaliyad Istish haadiyo ah taasi oo uu fuliyay halyey ka tirsan Katiibada Istish haadiyiinta ee Mujaahidiinta Xarakada Alshabaab.
Taliska ayaa intaasi ku daray in camaliyadda Hadafkeeda si wanaagsan u haleeshay islamarkaana lagu dilay saraakiishii Bartilmaameedku ahaa.
Wali waxaa isa soo tarayaan khasaaraha Murtadiinta lagu gaarsiiyay Camaliyaddaaasi Istish-haadiyada ah waxaana jirta dhaawacyo fara badan oo isugu jirta saraakiil iyo askar oo la gaarsiiyay isbitilaada magaalada Gaalkacyo balse waxii warar ah oo kusoo kordha waxaan kusoo gudbin doonaa wararka iyo barnaamijta dambe ee Andalus Inshaa Allaah.
Xigasho Idaacada Islaamiga Ah Ee Andalus.